Iyo yakanakisa DIY yezvipfuyo - Ikkaro
kudzidziswa >> Mascotas
Kana iwe uri murume anobatsira uye uchida DIY kana iwe unoda kuita zvinhu nemaoko ako uye urikutsvaga kuvaka zvishongedzo zvezvipfuyo zvako. Isu tinokusiya iwe rondedzero ye DIY yaunogona kugadzira zvisingaite uye zvakachipa zvinhu zvemhuka dzako, kunyangwe dziri shiri, imbwa, katsi, hove, huku kana chero mhuka.
Isu tinotarisa akawanda mapurojekiti senge anotengesa chikafu anogona kushandiswa kukitsi, imbwa, huku, nezvimwe. Zvisikwa uye magungano nema aquariums nezvikamu zvavo, nezvimwe.
Uye chimwe chinhu chinonakidza kwazvo, kwete chete kugadzira asiwo kugadzirisa uye kubira zvinhu zvatakatofanira kuvapa hupenyu hwechipiri kana kuita kuti zvinyatsobatsira uye kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nezvipfuwo zvedu.
Todo nyika ye DIY, nematurusi ake uye manomano pakushandirwa kwemhuka dzedu dzemhuka. Isu tinogara tichiedza kuti tinogona kudzokorora zvinhu zvezuva nezuva. Tarisa izvo zvatinazvo.
Kana chikamu chikangotora vhoriyamu, isu tinomaka nekumisikidza izvo zvidzidzo nechuru (imbwa, katsi, shiri, hove, huku) uye nerudzi (feeders, matoyi, nezvimwewo). Sefa inonakidza, ndiudze uye ndichaikoshesa.
Maitiro ekugadzira hamster vhiri kubva kune rakaomarara dhiraivhu
Pano isu tine imwe nzira yeku tora mukana wekare dhiraidhi, ndichiita naye vhiri re hamsters. Pfungwa yeiyi "tekinoroji" hamster vhiri ndeyekuti riite runyararo sezvinobvira kuitira kuti ruzha rwe hamster inomhanya mukati isativhiringidze.
Kana iwe uchida tenga akanyarara hamster mavhiri kuchitoro chako chemhuka iwe uchaona kuti iwo anodhura kwazvo. Neiyi yekukanganisa, iwe unotora yako hamster kuti imhanye pamhanya wechiedza pasina kuita ruzha.
Tichada dhisiki rakaomarara, kwatinofanira kubvisa shaft yemotokari.
Homemade shiri dzinodyisa
Mwedzi mishoma yapfuura takaburitsa chinyorwa nezve maitiro ekugadzira yekumba shiri feeder.
Nhasi tinounza mamwe mamodheru kuti iwe uwane mazano ...
Maitiro ekugadzira yakagadzirirwa imba shiri feeder
Chitubu chavepo uye minda, minda yemichero nemaguta azere neshiri dzinotanga mwaka wekubereka.
Kana iwe uine gadheni, kana imwe nzvimbo panouya shiri, tinogona kugadzira ino yekupedzisira-yakachipa feeder nemamwe maIkea mahwendefa.
Musiyano uripo pakati pekufidha uku uye nevamwe watinogona kugadzira nezvimwe zvekushandisa ndeyekuti ine zvishoma zvishoma kupenya kupfuura izvo zvakagadzirwa nemabhodhoro epurasitiki.
Izvo zvinhu zvatinoda zvinomiririrwa mumufananidzo unotevera, iwo mashoma kwazvo uye anodhura kwazvo.
Nzira yekugadzira pamba CO2 jenareta yemvura yakadzika
Kune vese avo vane kana vari kufunga kumisikidza akwariyamu, ndine chokwadi chekuti ruzivo urwu runobatsira ;-)
Icho chiri pamusoro maitiro ekugadzira pamba CO2 jenareta yemvura yakadzika.
Iyo CO2 jenareta inoshandiswa mukati kuti ikurumidze iyo photosynthesis yemiti, ichiita kuti ikure uye ichiberekana nekukurumidza, uye panguva imwechete inoshandiswa seyekuderedza PH.
Kwechizvarwa cheCO2 pachayo, chete shuga, yakasikwa mbiriso (yeumambo mbiriso haina kukurudzirwa nekuti ine zvimwe zvemakemikari zvinoriumba) uye yakadonhedzwa mvura.
Rutsigiro rwunoitwa nemabhodhoro eCoca-Cola.